बिहीबारको राशिफल : यस्तो छ तपाईंको २४ घण्टा – सजल सन्देश
By Sajal sandesh	 On१ माघ २०७६, बुधबार १४:४०
२०७६ साल माघ २ गते बिहिबार । ज्योतिष शा’स्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवा णी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
कार्यसम्पादनमा मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । स्थान परिर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनप्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा बृद्यिहुनेछ । ब्यापार ब्यसायको क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्तहुने समय रहेकोछ ।
मित्रजनहरुको भेटघाटका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धोका हुनसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । भोगबिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहने समय रहेकोछ । अप्रीय खबरले मन चिन्तीत तुल्याउला ।
आम्दानिका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । नयाँ लगानिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । बिशिष्ट ब्यत्तिहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा अधिक समय ब्यतित गर्नुपर्नेछ । खानपानको योग रहनेछ ।
श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ साथै सामान्य मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । पारीवारिक भोरझमेलाका कारण सामान्य तनाब आई पर्नेछ । गरीरहेको कार्य परिवर्तनको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
मित्रजनहरुको साथ सहयोग द्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादीत भएतापनि कार्यको श्रेय भने गैर ब्यत्तित्वहरुले प्रात्त पर्नेछन । मान्यजन सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अधुरो यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
बाणीका कारण आफन्तजन बिच वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानको प्रभाबले स्वास्थमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुनसक्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धोका हुनसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य कार्यको निम्ति ज्यादा परीश्रम र समय खर्च हुनेछ ।
भौतिक श्रोत साधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहनेछ । ब्यापार व्यवसायमा सामान्य समस्या झेल्नु पर्नेछ । स्थान परीर्वतनका कारण नजिकका मित्रसगँको सम्बन्धका टाढाँपन रहनेछ । सम्भाबना रहेकोछ । जिबन साथिको खराब स्वास्थले कार्यक्षेत्र प्रभाबित रहन सक्नेछ ।
परोपकार तथा सामाजिक कार्यमा जुट्ने अवसर प्राप्त रहनेछन । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक यात्रा कारण तात्कालिक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । स्वमस्थमा सामान्य तनाब देखा पर्नेछ ।
नेत्रृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । अध्यन अध्यापनका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा कार्य सम्पादनमा सहजता प्राप्त हुनेछ । कला कौशलका क्षेत्रमा तपाईको स्थान अब्बल साबित रहनेछ ।
सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । नयाँकार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग प्रशस्त प्राप्त रहनाले कार्य सम्पादनमा सहजता रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
ईष्टमित्र जनहरुको मद्धतमा आम्दानिका श्रोतहरु सबल बन्नेछन । मनोरञ्जन पूर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । बल तथा पराक्रममा बृद्धिहुनेछ , । शुभचिन्तकहरुको साथ पाप्त रहनाले जटील कार्य समेत सम्पादन हुनेछन ।
खानपानको प्रभाबले स्वास्थमा सामान्य खराबि उत्पन्न हुनसक्नेछ । ब्यापार व्यवसायमा सामान्य समस्या झेल्नु पर्नेछ । पारीवारिक भोरझमेलाका कारण सामान्य तनाब आई पर्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरु बाट धोका हुनसक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।